जनताको निक्षेप दुरुपयोग गर्ने कुनै पनि सहकारीलाई छाडिदैनः दक्ष पौडेल « News24 : Premium News Channel
जनताको निक्षेप दुरुपयोग गर्ने कुनै पनि सहकारीलाई छाडिदैनः दक्ष पौडेल
प्रकाशित मिति : May 09, 2019
काठमाडौं । मुलुकमा ३५ हजारको हाराहारीमा सहकारी संघ संस्थाहरु सञ्चालनमा छन् । यी सहकारी संघ संस्थाहरुमा विभिन्न प्रकारका बेथिति, विसंगतिहरु फैलिदै आएको छ । सर्बसाधारणहरुबाट उठाइएको निक्षेप रकम दुरुपयोग गरी धेरै सहकारीका सञ्चालकहरु फरार भएका भेटिएको छ ।
यसरी सहकारी संघ संस्थाहरुमा किन बेथितिहरु तीब्र रुपमा देखिदै आएका छन् ? सहकारी संघ संस्थाहरुलाई सु–शासनमा किन राख्न सकिएन ? राज्यले सहकारी संघ संस्थाहरुलाई किन अनुगमन गर्न सकेन ? यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि न्युज २४ टेलिभिजनले आफ्नो नियमित प्रस्तुति ६ प्रश्नमा राष्ट्रिय सहकारी बिकास बोर्डका सह–अध्यक्ष दक्ष पौडेललाई निम्त्याएको छ ।
न्युज २४सँग कुराकानी गर्ने क्रममा सह–अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो, ‘सहकारीका विकृति र बेतिथिलाई सम्हाल्नै सकिएन भन्दा पनि सहाकारीको विकृति तथा बेथितिहरुलाई सम्हाल्नका लागि, सहकारीमा विकृति र बिसंगतिहरु हुन नदिनका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी विभाग, सहकारी बिकास बोर्ड, सहकारी मन्त्रालयले चनाखो भएर हेरेको छ । तर केही बद्मास् र गलत प्रबृत्तिका ब्यक्तिहरुले सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएर बेथिति र विकृतिहरु गरेको भेटिएको छ ।’
साथै उहाँले वास्तवमै सहकारीकै रुपमा गठन गरी, सहकारीको मूल्य, मान्यतालाई अनुशरण गरेर सहकारी विषयगत संघहरुमा आबद्ध भई सञ्चालित सहकारीहरुबाट कुनै पनि बेथिति र विकृतिहरु भएको खण्डमा कारबाहीको लागि सहकारी विभाव, मन्त्रालय सबै तयार रहेको बताउनुभएको छ ।
बाँकी कुराकानी भिडियोमा हेर्नुहोस्ः